ဒီမူပိုင်ခွင့်မူဝါဒမှသက်ဆိုင်အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်စုဆောင်းနှင့်အကြောင်းအပါအဝင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ rentacarclub.com (ရည္ညႊန္း–), အားဖြင့်ငါတို့သည်မိတ်ဖက်, မှာမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့တွေ, ဖုန်းဖြင့်, မေးလ်, အီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာသား, မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမီဒီယာကနေတဆင့်လူမှုရေး, သို့မဟုတ်အခြား.မှလွဲ၍အတိအလင်းပေးနေရာ, ဒီသီးခြားမူဝါဒလျှောက်ထားပါဘူးအလေ့အကျင့်အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု, လူေတြမခန့်သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲ.ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒမတိုးချဲ့ဖို့အဆိုနှင့်ဆက်စပ်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှ(ရှိမရှိသည္အဲဒီလင့်ခ်သို့မဟုတ်ရှိမရှိသူတို့မျှဝေအားဖြင့်အခြားအသုံးပြုသူများ၏).
ကရင္အမ်ဳိးသားအဆို၏အစိတ်အပိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုများအသုံးပြု, သင်သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူသဘောတူဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.ဒီမူပိုင်ခွင့်မူဝါဒ၏အစိတ်အပိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအသုံးပြုခြင်း/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအခြေအနေအုပ်ချုပ်သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို.မည်သည့်အငြင်းကျော်သန့်သည်ဤမူပိုင်ခွင့်မူဝါဒနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုပါ.ယခုအသုံးပြုမှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှု.သင်သည်မကျင့်လျှင်သဘောတူနှင့်အတူမည်သည့်အစိတ်အပိုင်း၏ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ, မသုံးကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီးအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု.
ကားအဌားကလပ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းဤမူပိုင်ခွင့်မူဝါဒမှာမည်သည့်အချိန်, မည်သည့်အတွက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်မှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖဝါးသမ္မာသတိ, အသိပေးစာမပါဘဲ, ရိုးရှင်းစွာတင်ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်.မဆိုဤကဲ့သို့သောအပြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိရောက်သောအပေါ်သို့ချက်ချင်းတင်လိုက်သည်.သင်တို့၏ဆက်လက်အသုံးပြုမှု၏အဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနေတဲ့အသင့်လက်ခံမှုထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်မူ.ဤအကြောင်းပြချက်အဘို့, သွားရောက်လည်ပတ်ကျေးဇူးပြုပြီးဒီစာမျက်နှာကိုပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အများဆုံးမကြာသေးမီဗားရှင်း၏လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်အသုံးပြုမှု၏စည်းကမ်းချက်များ.
"ကွတ်ကီး" ဆိုလိုသည်သေးငယ်တဲ့စာသားဖိုင်ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်အားဖြင့်ကိုကြည့်ရှုသည့်အခါအချို့အစိတ်အပိုင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်/သို့မဟုတ်အသုံးပြုတဲ့အခါအချို့သောအင်္ဂါ၏.အသေးစိတ်အချက်အကွတ်အားဖြင့်အသုံးပြုဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ထုတ်ထားကြသည်အတွက်ပုဒ်မ ၈, အောက်;
"ဝက်ဘ်ဆိုက်" ဆိုလိုတာကဒီဝက်ဘ်ဆိုက်, Rentacarclub.com, နှင့်အပေါငျးတို့သစာမျက်နှာများတွင်ဒါကြောင့်ပြန်ဖို့;
"ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့/ကျွန်ုပ်တို့၏" ဆိုလိုတာကားအဌားကလပ်ကုမ္ပဏီလီမိ, ကုမၸဏီတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာထုိင္း(အောက်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အရေအ 0205560010403), အဘယ်သူ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ 64/70 Moo 12, Nongprue, Bang Lamung, Chonburi.
ဝက်ဘ်ဆိုက် rentacarclub.com ကပိုင်ဆိုင်နှင့်လည်ပတ်ကားအဌားကလပ်ကုမ္ပဏီကန့်သတ်ကုမ္ပဏီတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာထုိင္း(အောက်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အရေအ ၀၂၀၅၅၅၀၀၁၃၃၄၅), အဘယ်သူ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ 64/70 Moo 12, Nongprue, Bang Lamung, Chonburi.
အောက်ပါအလက်စုဆောင်းကောက်ယူစေခြင်းငှါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်:နာမည်မွေးဖွားရက်စွဲ;က်ား;စီးပွားရေးလုပ်ငန်း/ကုမ္ပဏီအမည်;အလုပ်အကိုင်ခေါင်းစဉ်;အလုပ်အကိုင်;ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ထိုကဲ့သို့သောအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ;လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအဖြစ်ပို့စ်ကိုကုဒ်များ, ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့်အကျိုးစီးပွား;ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်တွေအဖြစ်ခရက်ဒစ်/ငွေကြိုပေးကဒ်နံပါတ်များ;IP လိပ်စာ(လျှောက်စုဆောင်းရောဂါကိုကူညီအတူပြဿနာများကျနော်တို့ရဲ့ဆာဗာကို, စီမံခန့်ခွဲဖို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာ, ကူညီရန်, သင်ဖော်ထုတ်ရန်စုသိမ်းကျယ်ပြန့်လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်);ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာအမျိုးအစားနှင့်ဗားရှင်း(အလျောက်စုဆောင်းထားသော);လည်ပတ်ရေးစနစ်(အလျောက်စုဆောင်းထားသော);စာရင်းတစ်ခု၏နှင့်အတူစတင်ရည်ညွှန်းဆိုက်, သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သို့ဝက်ဘ်ဆိုက်, နှင့်ဆိုက်ကားရန်(အလိုအလျှောက်စုဆောင်းထားသော).
ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသည်ဘွတ်ပုံစံစႏိုင္သည္ဖောက်သည်ရရှိရန်အချက်အလက်နှင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်း.ကျနော်တို့စုဆောင်းသုံးစွဲသူများရဲ့အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်, ထူးခြားတဲ့တို(လိုသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်မာင္းလိုင္စင္), ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များ, နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်ထားအပိုင်း ၄.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်အကြောင်းသင်ပေးရမည်မှန်, တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံ, နှင့်အားလုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အကောင့်အသေးစိတ်အချက်()ဆံ့ရမယ်သင်၏အမည်, လိပ်စာနှင့်အခြားအမေတ္တာရပ်ခံချက်အလက်.သငျသညျတာဝန်ရှိသည်စောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ရှိနှင့်တိကျမှန်ကန်.ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ကျနော်တို့စုဆောင်းပြန်ကြားရေးနှင့်ကြောင်းကိုသင်အွန်လိုင်းနှင့်အတူကျနော်တို့စုဆောင်းပြန်ကြားရေးနှင့်ကြောင်းကိုသင်မှတဆင့်အခြားနည်းလမ်းများ.ကျွန်တော်လည်းပေါင်းစပ်သင့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုသင်သည်အခြားရင်းမြစ်တွေမှ.
သတိပြုပါကျေးဇူးပြုပြီးသောအခါသင်ပယ်ဖျက်သင့်အကောင့်သတင်းအချက်အပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုက်, သို့မဟုတ်ဆိုင်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်သင့်ရဲ့အချက်အလက်များအတွက်ဆီလျော်ကာလအချိန်ကြည့်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် recordkeeping, အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လိမ်လည်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးလှုပ်ရှားမှုများ.
အချို့သောအခြေအနေများတွင်, ကျနော်တို့အမေးများအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်သည်လူထက်အခြားကိုယ်အပါအဝင်, ဥပမာအားဖြင့်, အီး-မေးလ်လိပ်စာများပေးဖို့မိတ်ဆွေတွေကိုအဘယ်သူပိုလက်ဆောင်ကတ်များ, အီးကဒ်များကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်လင့်ခ်မှဝက်ဘ်ဆိုက်, သို့မဟုတ်စာပို့လိပ်စာများ၏တစ်စုံတစ်ဦးသင်ဆန္ဒရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်.သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်အသုံးပြုသည်အမိန့်ကြော်ငြာစာသို့မဟုတ်အချက်အလက်သင်တောင်းဆိုသောနှင့်/သို့မဟုတ်အကြောင်းကြားရန်အလှတရားနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်အခွင့်အလမ်း.ထိုကဲ့သို့သောအသွယ်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမနှင့်အတူအခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်း, အခြားအထက်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်ဒီကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတ်တမ်းအချို့မ-ဖော်ထုတ်ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုအချက်အလက်, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အရေအတွက်ကိုမှလာရောက်လည်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်, နေ့စွဲ/အချိန်သင်အပြင်, အကြိမ်အရေအတွက်သင်ပြန်လာဖို့ဝက်ဘ်ဆိုက်, နှင့်အခြားနှိပ်-စမ်းချောင်း.ဤအချက်အလက်များအတွက်အသုံးပြုသည်ပြည်တွင်းရေးရည်ရွယ်ချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်သာကောင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့.ထို့အပြင်, မည်သည့်အချက်အလက်များသည်မလိုအပ်ဘဲသင်ပေးမှကျွန်တော်တို့မှတ်ယူရမည်ရးလျှို့ဝှက်, နှင့်ကျနော်တို့အခမဲ့ဖြစ်ရမည်ပွားရန်, ကိုအသုံးပြုခြင်း, ထုတ်ဖော်နှင့်ဖြန့်ဖြူးထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များသည်မလိုအပ်ဘဲအခြားသူများကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်လျှင်.
ကိုခွင့်ပြုစာရင်း, အရံ, စာအုပ်စုဆောင်းတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်;
ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်စဉ်မှ, authorise နှင့်ငွေပေးချေမှုစုဆောင်း, ဘီလ်သင်ဒါမှမဟုတ်သင်ပေးဆောင်;
ပြီးတာနဲ့သင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး, သင်အရာတွင်ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်စာရင်းနှင့်မေးလ်ပို့နိုင်သောစာရင်း၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, အဘယ်သူသည်မိတ်ဆက်ပေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်သူသင်ညွှန်ပြခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဘယ်သူအခွင့်အာဏာရပြီးသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုမှလွှဲပြောင်းဖို့အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုများအသုံးပြု, နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျ/ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထပ်စေလွှတ်မည်အကြောင်း, သင်တို့မွမ်း, သတင်းလွှာ, စာပေးစာယူနှင့်အခြားပစ္စည်းများ၏ဒီအမျိုးအစား.သင်တို့ကိုမလိုချင်ကြဘူးဆိုရင်လက်ခံရရှိရန်ဤအဆက်သွယ်ရေး, သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်နှုတ်ထွက်.
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူနှင့်/သို့မဟုတ်ဘယ်မှာဥပဒေဖြင့်ခွင့်ပြု, ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအသားကိုထည့်သွင်းစေခြင်းငှါအရာဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအီးမေးလ်နှင့်/သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနှင့်/သို့မဟုတ်အစာနှင့်/သို့မဟုတ် Facebook နှင့်/သို့မဟုတ်, သတင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်/သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကို.မည်မဟုတ်, သို့သော်, ပေးပို့များသည်မလိုအပ်ဘဲမည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်နှောက်ယှက်နှင့်ယူလိမ့်မည်အားလုံးဆီလျော်သောခြေလှမ်းများကျနော်တို့အပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခွင့်နှင့်အတူလိုက်လျောကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများ.
ကြော်ငြာအဘယ်သူ၏အကြောင်းအရာပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံစေခြင်းငှါအဘယျသို့အဖြစ်လူသိများသည်"အမူအကျင့်ကြော်ငြာခြင်း"–ကြော်ငြာသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပါတယ်သင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှု.သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်အသုံးပြု, အဖြစ်အောက်တွင်အသေးစိတ်.သင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်နှင့်ကန့်သတ်သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ဒီအလမ်းအတွက်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ္ေ.ပါကကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့မထိန်းချုပ်ဘူး၏လှုပ်ရှားမှုများထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာ, မဟုတ်သလိုသတင်းအချက်အလက်သူတို့စုဆောင်းနှင့်အသုံးပြုမှု.ကန့်သတ်ထား၏အသုံးပြုမှုသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုဒီအလမ်းအတွက်မည်မဟုတ်ကြော်ငြာကိုဖယ်ရှား, ဒါပေမယ့်ဖြစ်စေမည်နည်းသက်ဆိုင်ရာမှသင်၏အကျိုးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်.
ယာဥ္ေမာင္း historyis အသုံးပြုမှအကဲဖြတ်အရည်အချင်းဖောက်သည်အဖြစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံအစီအစဉ်(့).
ကျွန်တော်သာသင့်ဒေတာအဖြစ်အလိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့အတွက်အပိုင်း ၄, နှင့်/သို့မဟုတ်အဖြစ်အရှည်ရှိသည်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်စောင့်ရှောက်ဖို့.
ကျနော်တို့မျှဝေနိုင်ပါသည်, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်နှင့်အတူအဘယ်သူသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတတိယပါတီများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူလည်ပတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်, ပံ့ပိုးဝန်ဆောင်မှုများ, ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပို့ချ, သို့မဟုတ်သင်န, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်စပ်နေသောအဖွဲ့သို့မဟုတ်အေးဂျင့်, ဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အားပါတီစောင့်ရှောက်ရန်သဘောတူအများလျှို့ဝှက်ဤအချက်.ဥပမာပြည့်စုံတာင္း, န်ဆောင်မှုများအတွက်ပို့န္ေဆာင္မႈ, ဆန်းစစ်ချက်အလက်ပေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကူအညီပေးရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုလင့်(အပါအဝင်လစာစာရင်းများနှင့်အချိတ်အဆက်), အပြောင်းအလဲအကြွေးဝယ်ကဒ်ငွေပေးချေမှု, နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု.
သင်သတ်မှတ်ဖို့လက်ခံသဘောတူရန်ဤအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်တင်သွင်းသတင်းအချက်အလက်.ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းဒေတာမှတတိယပါတီ, ကျွန်တော်တို့ယူလိမ့်မည်အားလုံးဆီလျော်သောခြေလှမ်းများ၏ဒေတာအဖြစ်ကုသလုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်.ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်များထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်မကန့်သတ်, အသုံးပြုရန်အတွက်တရားဝင်စည်းနှောင်သဘောတူထားသောဝေါဟာရများအကြားအမေရိကန်နှင့်မည်သည့်တတိယပါတီ.
ကျနော်တို့အကောင်အထည်ဖော်အမျိုးမျိုး၏လုံခြုံရေးအစီအမံကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အများ၏လုံခြုံသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အခါသင်သည်သင့်အကောင့်ကို, တင်သွင်း, သို့မဟုတ်ဝင်ရောက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်.
ကျနော်တို့၏အသုံးပြုမှုကိုပူဇော်ဟာလုံခြုံတဲ့ဆာဗာ.အားလုံးထောက်ပံ့ထိမခံ/ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်မှတဆင့်လုံခြုံသောနည်းပညာနှင့်ထို့နောက်စာဝှက်ထားသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ပံ့ပိုးပေး'ဒေတာဘေ့စ, သာဖြစ်ဖို့လက်လှမ်းအားဖြင့်သူတို့သည်အခွင့်အာဏာနှင့်အတူအထူးဝင်ရောက်ခွင့်အခွင့်အရေးကဲ့သို့သောစနစ်များ, သူရန်လိုအပ်သည်အချက်အလက်လျှို့ဝှက်စောင့်ရှောက်.
ကံမကောင်းစွာ, အဘယ်သူမျှမဂီကျော်အချက်အလက်အင်တာနက်, နှင့်အဘယ်သူမျှမစနစ်၏သိုလှောင်မှုအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေတာ, အာမခံထားခံရဖို့လုံးဝလုံခြုံ.ကားအဌားကလပ်မသေချာသို့မဟုတ်ခိုင်လုံလုံခြုံရေးများ၏မည်သည့်အချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သည္.မည်သည့်ဂီယာသို့မဟုတ်အခြားပြဋ္ဌာန်းချက်အလက်များ၏ပြုပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုမှာ.
အချို့သောအခြေအကျွန်ုပ်တို့သည်မည်အကြောင်းဝေမျှဖို့အချို့သောဒေတာအားဖြင့်ကျင်းပပြီး, သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်, ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုခြင်း, နေရာရှင်းနဲ့အတူလိုအပ်ချက်များကိုဥပဒေပြုတရားရုံးအမိန့်, သို့မဟုတ်အစိုးရအာဏာ.ကျနော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်မည်သည့်နောက်ထပ်ခွင့်ပြုချက်မှသင်နိုင်ရန်အတွက်မျှဝေသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုအတွက်ထိုသို့သောအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောစွာလိုအပ်နှင့်အတူမည်သည့်တရားဝင်စည်းနှောင်ကြောင်းတောင်းဆိုထားသည်.
နိုင်ပါသည်, အချိန်, ချဲ့ထွင်သို့မဟုတ်လျှော့ချကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားနှင့်ဤအခွင့်အပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါရောင်းချခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းထိန်းချုပ်မှုများ၏အားလုံးသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး.ပေးထားသောဒေတာအားဖြင့်သုံးစွဲသူများလိမ့်မည်, ဘယ်မှာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမှမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအောင်လွှဲပြောင်းခြင်း, ပြောင်းရွှေ့နှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းနှင့်အသစ်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်မည်, ၏စည်းကမ်းချက်များကိုအောက်တွင်ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ, အဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအများကြီးစုဆောင်းကောက်ယူ.
အခါသင်တင်ပြချက်အလက်က္ဆိုက္ေ, သင်မည်ပေးထားသောရွေးချယ်မှုများကိုကန့်သတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်း၏အချို့သောသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကို၏.အထူးသဖြင့်, ငါတို့သည်ရည်ရွယ်ထားပေးစေခြင်းငှါသင်တို့အားကြီးသောထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုအဘို့တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များ(အပါအဝင်စွမ်းရည်မှရွေးချယ်-ထွက်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိကနေကျွန်တော်တို့ကိုစေခြင်းငှါအရာအား unsubscribing လင့်ခ်ကိုအသုံးပြုပေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်များ.
မီကွတ်ထား၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ် deviceyou ကိုပြသပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာ, မည္၏ခွင့်ပြုချက်တောင်းထားသူများ.ပေးခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အမရကွတ်ကီးများသင်နာက္တစ္ဖြဲပးအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ဝန်ဆောင်မှု.သင်မည်, သင်ဆန္ဒရှိလျှင်, ငြင်းဝန်တင်ကွတ်;သို့သော်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုငါတို့၏ဆိုက်ကို၏လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မပြုစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်အပြည့်အဝအဖြစ်ရည်ရွယ်.
ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုဖြာဝန္ေဆာင္မႈအားဂူ, Hotjar နှင့်ဆင်တူ.ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြာကိုရည်ညွှန်းထား၏ကိရိယာအသုံးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုမှုစာရင်းဇယား, ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းဖို့ဘယ်လိုနားလည်လူသုံးဝက်ဘ်ဆိုက်.ဒီအလှည့်တွင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်တိုးတက်လာဖို့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း.သင်တို့ပြုရှိသည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုသုံးစွဲဖို့, သို့သော်နေတုန်းကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုအသုံးပြုမှမဆိုစွန့်စားမှုရှိုးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒါမှမဟုတ်၏လုံခြုံစွာအသုံးပြုရန်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်, ဒါဟာေစဉ်မပြတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ပိုကောင်းတဲ့နှင့်ပိုမိုအသုံးဝင်တွေ့အကြုံသင့်အဘို့အ.
ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုသင်ဝန်ခံသောသင်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးအပြည့်အဝလွတ်လပ်သောရ၏ဥပဒေများသင့်ရဲ့နေထိုင်ရာ.ကျနော်တို့သိလျက်စုဆောင်းအောက်မည်သူမဆိုထံမှမည်သည့်သတင်းဆယ့်လေး(၁၄)အသက်အရွယ်အနှစ်.အဘယ်သူမျှမကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသက်သေပြသတင်းအချက်အသင့်ဖြစ်တင်သွင်း, သို့မဟုတ်တင္ထားသည္မှာ, ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်ဧည့်အောက်မှာတစ်ဆယ့်လေး(၁၄)အသက်အရွယ်အနှစ်မပါဘဲကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်၏သူတို့ရဲ့မိဘသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူသည်.
သငျသညျမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကအကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ, ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပေးပါအီးမေးလ်ဖြင့်မှာ rentacarclub.co@gmail.com.
ယခုသေချာစေလာဒ္ႏရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်, ကအကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုင်အကြောင်းသင်(တိုင်းအောက်ပိုင်း ၇ အထက္).
ကုမၸဏီ:ကားအဌားကလပ်ကုမ္ပဏီ, မှတ်ပုံတင်နံပါတ် 0205560010403, မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ 64/70 Moo 12, Nongprue, Bang Lamung, Chonburi.